Beesha Mudulood oo arrin culus ka dalbatay DF, dowlad goboleedyada iyo Amisom - Caasimada Online
Home Warar Beesha Mudulood oo arrin culus ka dalbatay DF, dowlad goboleedyada iyo Amisom
Beesha Mudulood oo arrin culus ka dalbatay DF, dowlad goboleedyada iyo Amisom
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gaba-gabeeyey shir wadatashi iyo is-cafis ah oo beelaha Mudullood uga socday seddaxdii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana war-murtiyeedkii laga soo saaray looga hadlay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo arrimaha Bulshada.
Qodobka koowaad oo ah kan ugu xasaasisan waxaa looga hadlay arrimaha amniga gobollada ay beeshu degto iyo mustaqbalka xasiloonida guud ahaan dalka. Waxaana baaq deg deh ah loogu diray dhinacyada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo AMISOM.
“Beel-weynta Mudullood waxay ka dalbaneysaa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo AMISOM in si deg deg ah loo xoreeyo deegaanada ay beeshu degto oo mudo dheer ay nabad diidku ku habsadeen” ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah qodobkaas.
Sidoo kale war-murtiyeedkan waxay beesha Mudullood ku balan qaaday “In si mudleh ay gacan uga geysaneyso xoreynta deeganadeeda iyo sidii loo gaarsiin lahaa dowladnimo.”
Qoraalkan ka soo baxay beel-weynta Mudullood waxaa lagu sheegay in xilligan ay xad-gudubyo culus ka dhex jiraan hey’adaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan hey’adaha ammaanka iyo garsoorka, waxayna dalbatay beeshu in lasoo afjaro xadgudubyadaas.
Sidoo kale qodobkan waxay beelaha Mudullood uga digeen in ciidamo shisheeye oo aan sharciyad u heysan dalka lasoo geliyo.
“Shirku waxa uu ka digayaa in lasoo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan heysan sharciyad kana tirsaneyn AMISOM” ayaa lagu yiri.
Waxaa xusid mudan in ciidamo aan shirciyad u heysan oo aan ka tirsaneyn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay qeybo ka mid ah gobollada dalka ku suganyihiin, kuwaas oo ka socda dowladda Itoobiya.
4-tii bishii May ee sanadkan diyaarad ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay, waxaa la sheegay inay soo ridisteeda qirteen ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo aan qeyb ka aheyn AMISOM, kuwaas oo weli ku sugan Bardaale, sidoo kale magaalooyin dhawr ah ayey ciidamadaas aan sharciyeysneyn ka joogaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Hoggaanka dowladda Soomaaliya oo gacan saar dhow la leh hoggaanka dowladda Itoobiya, ayaa marar badan wax laga weydiiyey ciidamadaas sida aan sharciga waafaqsaneyn dalka ku jooga, balse ma cadeyn weli baahida keentay, kamana saarin.